(Daawo Sawiradda) Paris: Geerida C/xamiid Abacuud oo la xaqijiyey, balse ma dhamaaday Hawlgalkii ? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(Daawo Sawiradda) Paris: Geerida C/xamiid Abacuud oo la xaqijiyey, balse ma dhamaaday Hawlgalkii ?
Akhristayaal, Saxaiibayaal, intiinii la socotay, Warkeenna Duhurnimo ee Radio Dalsan waxaan ku sheegnay in la dilay C/xamiid Alacuud oo lagu tuhunsanaa inuu ahaa maskaxdii ka dambeysya Weerarkii ay Dagaalamayaal ka tirsan Kooxda Daacish bishan November 13-dii (Jimcihii hore) ka fuliyeen gudaha Caasimadda dalka Faransiiska ee Paris.
Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa Warbixin aan ka diyaarinay Dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee Xiisadaasi.
Weerarkii Jimcihii la soo dhaafay ka dhacay caasimadda dalka Faransiiska ee Paris ayaa waxa uu haatan u muuqda inay Ciiddanka Ammaanka Faransiiska dileen inta badan Xubnaha lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen Weerarkaasi.
Waaberigii hore ee shalay waxay Ciiddanka Faransiiska muddo 6 saacadood la dagaalamayeen kooxo hubeysan oo la rumeysan yahay inay ka tirsanaayeen Kooxda Daacish, isla markaana ku lug lahaayeen Weerarkii Paris.
Dowladda Faransiiska waxay warar Xooraansi ah ka heleen Sirdoonka Dowladda Morooko oo iyagu u far muuqay halka uu ku dhuumaalaysanayo Jihadistaha C/xamiid Abacuud, iyadoo ay Sirdoonka Faransiiska war iyo wacaal u haynin inuu ku sugan yahay gudaha Faransiiska.
Sirdoonka Faransiiska waxay ilaa shalay rumeysnaayeen inuu Jihadistahaasi ku sugan yahay gudaha Syria oo uu ka barbar dagaalamo Kooxda Daacish, mana jirto Hya’ad ka war haysay xilliga uu soo galay Faransiiska ?, qaabka uu ku soo galay? iyo halka uu ka soo galay?
C/xamiid Abacuud oo 28-jir ah waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa dalka Moroko, balse waxa uu haystay Dhalashadda dalka Belgium, waxaana la rumeysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambaysay weerarkii bishan 13-dii ka dhacay Paris.
Dacwad-oogaha magaalladda Paris, Francios Molins ayaa xaqjiiyey in Jihadise C/xamiid Abacuud shalay lagu dilay Iska horimaadkii ka dhacay Deegaanka Saint Denis ee magaalladda Paris.
Waxaa la sheegay in Shiish-yahan (sniper) ka tirsan Boliska Faransiiska uu toogtay C/xamiid Abacuud, kadibna ay ku qarxeen dhowr Bambo-gacmeed oo uu watay.
Baaritaano dhinaca dheecaanka Hiddo-sidaha ee DNA-da ayaana saakayto lagu xaqiijiyey in ninka la dilay uu ahaa C/xamiid Abacuud, oo la rumeysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii Paris o oay ku geeriyoodeen 129-qof.
Dhinaca kale, Dagaalamyaashii ku jiray Dhismihii shalay la weeraray ayaa la sheegay inay si adag u dagaalamaen, waxaana la sheegay inay qoryihii ay wateen ka rideen 5,000 oo xabbadood, ka hor inta aan iyaga la dilin.
Dagaalamyaasha waxaa ka mid ahayd Gabar lagu magacaabo Xasna Cali Bolahjen oo 26 jir ahayd, taasi oo ay ehel ahaayeen C/xamiid Abacuud.
Gabadhaasi ayaa is-qarxisay, xilli ay Boliska u soo dhawaadeen, waxaana qaraxaasi ku dhintay Eey u tababarnaa inuu kashifo Miinooyinka iyo waxyaabaha qaxa.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladda Faransiiska waxaa soo maray Isbuuc murugo xambaarsan, oo ay Kooxda Daacish hawlgalo ka fuliyeen magaalladda Paris.
Ma cadda inuu Hawlgalku dhamaaday iyo inuu muddo dheer qaadan doono, iyadoo Madaxweynaha Faransiiska sheegay inay ka go’an tahay inay Daacish kula dagaalamaan meel kasta iyo waqti kasta.
Barlamaanka Faransiiska ayaa la filayaa inay u codeyn doonaan in la kordhiyo Xukun Degdegga ee lagu soo rogay dalka weerarkii Paris kadib.